Fiarovana amin'ny tonelina an-dalambe-News-Ningbo Joiwo Explosion proof Technology Co., LTD
FIAINANA: 2019-12-03 HITS: 49
Tao anatin'izay taona lasa izay, ny fiarovana ny tonelina an-dalambe dia nanjary olana lehibe manerantany. Mihamaro hatrany ny tonelina namboarina hamolavolana tamba-jotra vaovao amin'ny alàlan'ny tandavan-tendrombohitra na hisorohana ny olana ara-tontolo iainana amin'ny tanàn-dehibe.
Amin'ny ankapobeny, vitsy ny lozam-pifamoivoizana mitranga ao anaty tionelina noho ny amin'ny làlana misokatra. Na izany aza, raha sendra misy lozam-pifamoivoizana ao anaty tionelina dia matetika no lehibe kokoa ny vokany amin'ny làlana misokatra. Ny voka-dratsin'ny trangan-javatra iray ao anaty tionelina dia mety hanimba sy mampidi-doza indrindra, indrindra raha misy afo, satria ny toerana mihidy dia manakana ny fiparitahan'ny hafanana sy setroka. Ho fanampin'izany, ny fetran'ny fidirana amin'ny afo sy ny asa fanavotana, ny fahasarotana amin'ny fiantohana ny lalan'ny fandosirana ireo mpampiasa tionelina avy amin'ny habaka mihidy dia mampitombo ny hamafin'ny lozam-pifamoivoizana.
Ny afo ao anaty tionelina dia tsy manimba ny ain'ny mpampiasa ny tonelina fotsiny, fa mety hiteraka fahasimbana amin'ny firafitry ny tionelina miaraka amin'ny voka-dratsin'ny fitsarana an-tendrony ny renivohitra izay soloin'ny tionelina. Manoloana izany dia ilaina ny misoroka ny lozam-pifamoivoizana ao anaty tonelina ary manome fepetra sahaza ho an'ireo mpampiasa ny tionelina mba hifandraisana amin'ireo serivisy vonjy taitra mba hovonjen'ny mpamono afo.
Mampalahelo fa tsy misy ny fiarovana tanteraka amin'ny tonelina an-dalambe. Noho izany, ny mpitantana ny lalam-bahoaka dia tsy maintsy manao izay ezaka rehetra hampihenana ny risika arak'izay azo atao.
Ny vahaolana ho an'ny fifandraisana vonjimaika amin'ny tunnel dia manolotra rafitra iray manontolo izay mitantana ny dingana rehetra amin'ny fifanakalozan-kevitra mitsikera eo amin'ireo mpampiasa ny tonelina sy ny serivisy vonjy maika.
Ny vahaolana amin'ny serasera ataonay ho an'ny tunnels dia mahatonga ny rafi-pifandraisana rehetra ho mora ampiasaina ho an'ireo mpandraharaha amin'ny foibe fitantanana fifamoivoizana eo an-toerana na lavitra, na dia miantoka ny fanajana ny lalàna momba ny tionelina aza. Amin'ny toe-javatra maika, ny takelaka fiantsoana afo dia afaka mifehy ny fifandraisana. Voalahatra arak'izany ny laharam-pahamehana amin'ny vahaolana amin'ny fifandraisana maika, izay ahazoana antoka fa ny torolàlana sy ny hafatra manakiana dia maheno sy takatry ny mpandray marina.
Ningbo Joiwo dia orinasa matihanina manokana amin'ny famokarana telefaona vonjy maika telefaona finday SOS / tononkira VoIP. Ningbo Joiwo dia nanomboka ny orinasany niorina manodidina ny filàna telefaona fiarovana ny tonelina maoderina tamin'ny taona 2005, ary niditra an-tsokosoko tamin'ireo fivoarana ireo nanomboka teo. Ny orinasa dia manana traikefa manan-danja amin'ny fametrahana telefaona vonjy maika any amoron-dàlana VoIP ao anatin'ny toerana misy ny tionelina kely indrindra ao anaty sy any ivelany. Ny fananana tionelina lavitra be any Sina sy any ampitan-dranomasina dia mitaky ny fampandrosoana teknolojia izay azo arahi-maso ihany koa ny lavitra, hiantohana fa miasa tokoa ny rafitra ERT raha sendra lozam-pifamoivoizana lehibe iray.
Rahoviana ny zoma mainty 2019?